ကွန်ပရက်ဆာရေနံ Filter ကိုအစားထိုးနဲ့ Maintenance - Airpull (ရှန်ဟိုင်း) Co. , Ltd မှ Filter
အဆိုပါစုပ်ယူသောလေထုထဲတွင်ပါရှိသောဖုန်မှုန့်လေထု filter ကိုဆဲလိမ့်မည်။ ပိတ်ဆို့ခံရခြင်းမှ abraded ခံကနေဝက်အူလေကြောင်းတွန်းသို့မဟုတ်လေထုရေနံ separator တားဆီးဖို့, filter ကိုဒြပ်စင် 500hours များအတွက်အသုံးပြုခဲ့ပြီးမှသန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ်အစားထိုးလိုအပ်ပါသည်။ မိုးသည်းထန်စွာဖုန်မှုန့်တည်ရှိဘယ်မှာလျှောက်လွှာပတ်ဝန်းကျင်၌, သင်အစားထိုးသံသရာကိုအတိုကောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ မတိုင်မီ filter ကိုအစားထိုးရန်အတွက်စက်ကိုရပ်တန့်။ အဆိုပါမှတ်တိုင်အချိန်အသေးအဖွဲ၏ရည်ရွယ်ချက်အဘို့, အသစ်တခု filter ကိုတစ်ခုသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းအားလပ်ချိန်မှာ filter ကိုအကြံပြုသည်။
လေးလံသောခြောက်သွေ့ဖုန်မှုန့်အများစုဖယ်ရှားပစ်ရမှသကဲ့သို့ 1. အနည်းငယ်, တစ်ဦးပြားမျက်နှာပြင်ဆန့်ကျင် filter ကိုနှစ်ယောက်စလုံးကြီးစွန်းထိပုတ်ပါ။
2. လေကြောင်းစုတ်ယူခြင်း၏ညှနျကွားဆန့်ကျင်မှုတ်ဖို့ 0.28Mpa အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော၏ခြောက်သွေ့သောလေထုကိုသုံးပါ။ အဆိုပါ nozzle နဲ့ခေါက်စက္ကူအကြားအကွာအဝေးကိုအနည်းဆုံး 25mm ဖြစ်သင့်သည်။ ထိုအတက်နှင့်အဆင်းအမြင့်နှင့်အတူမှုတ်ဖို့ nozzle ကိုအသုံးပြုပါ။
3. စစ်ဆေးနေပြီးနောက်, သင်က, ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတစ်စုံတစ်ရာပေါက်တွေရှိပါတယ်လျှင် filter ကိုဒြပ်စင်စွန့်လွှတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပါးလွှာဖြစ်လာသင့်ပါတယ်။
1. လေထဲမှာတွန်းရေနံ filter ကိုချွတ်ဝက်အူနှင့်စွန့်လွှတ်။
2. ဂရုတစိုက် filter ကို shell ကိုရှင်းလင်း။
3. differential ကိုဖိအားပေးပို့သူယူနစ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
4. ရေနံနှင့်အတူ gasket ပိတျထားသော filter ကိုချောဆီ။
5. တံဆိပ်ခတ် gasket ဖို့ filter ကိုဒြပ်စင်ဝက်အူ, ပြီးတော့တင်းကျပ်စွာကတံဆိပ်ခတ်ထားရန်သင့်လက်ကိုအသုံးပြုပါ။
6. သင်ကစက်စတင်ပါပြီတစ်ချိန်ကဆိုယိုစိမ့်ရှိ, မရှိကိုစစ်ဆေးပါ။ အာရုံစူးစိုက်မှု: သာလျှင်တဲ့အခါမှာသင် filter ကိုဒြပ်စင်ကိုအစားထိုးနိုင်မ, လေထုတွန်းရပ်တန့်ခဲ့ပြီးစနစ်မဖိအားလည်းမရှိ။ ထို့အပြင်ပူရေနံကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ပိုငျးဒဏ်ရာရှောင်ကြဉ်ပါ။